သက်တန့်မာန - ကျောက်ခေတ်ပုတီးလက်ကောက် - eGay ဆိုင်
စုစုပေါင်း € 0,00
သက်တန့်မာန - ကျောက်ခေတ်ပုတီးလက်ကောက်
သင်ကယ်တင်သည် € 4,00 (28 %)
100% Secure ငွေပေးချေမှု SSL ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် များသောအားဖြင့် 1-5 စီးပွားရေးရက်အတွင်းသင်္ဘော (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များပါဝင်မပါဘူး) ။
သင့်ရဲ့အမိန့်စတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်မှုကိစ္စများကြုံတွေ့ရလူကြိုက်များပစ္စည်းများကိုလည်းပါဝင်သည်လျှင်, အမိန့်5အကြားယူနိုင်သည် - 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးရန်။
ရေကြောင်းအချိန်အကောက်ခွန်, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, အားလပ်ရက်နှင့်ရာသီအလိုက်ကြောင့်ထိခိုက်နေသည်သတိပြုပါ။
shipping Method ကို
shipping အချိန် (စီးပွားရေးနေ့ရက်များခခနျ့မှနျး)
အခမဲ့ပို့ပေးသည် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 8 - 35
ကနေဒါ * 12 - 35
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ပြင်သစ်, စပိန်, ဂျာမနီ, နယ်သာလန်, ယူကရိန်း, ဂျပန်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဒိန်းမတ်, ဖင်လန်, အိုင်ယာလန်, နော်ဝေး, ပေါ်တူဂီ, ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန် 10 - 40
ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, ချီလီ, ပီရူး, ကိုလံဘီယာ 15 - 45
အားလုံးအခြားနိုင်ငံများ 15 - 50
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော shipping အချိန်မြင့်မားသငျသညျအမိန့်ထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံပြီး, အချိန် 90% ကအများဆုံးအချိန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောထက်တိုတောင်းအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။
* စံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ packages များအာရှတိုက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုလှောင်ရုံကနေကနေဒါသို့ကွှလာ3လအထိကြာနိုင်တယ်, ကြောင့်အပိုကျင်းပနိုင်ရန်အချိန်ကနေဒါနယ်စပ်န်ဆောင်မှုများအေဂျင်စီအားဖြင့်ချမှတ်ထားကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။
ငါတို့ကမ်းလှမ်းသည် အခမဲ့ပို့ပေးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတိုင်းကို item အဘို့, နိမ့်ဆုံးဝယ်ယူလိုအပ်မျှ.
သွင်းကုန်များ၏တိုင်းပြည်များကသတ်မှတ်အဖြစ်အားလုံးအမိန့်အကောက်ခွန်နှင့်အကောက်ခွန်အခကြေးငွေမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အကောက်ခွန်နှင့်အကောက်ခွန်အခကြေးငွေသင့်ရဲ့အမိန့်နှင့် / သို့မဟုတ်ရေကြောင်းစုစုပေါင်းတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
Egay ဆိုင်တင်သွင်းနဲ့ဆက်စပ်အခကြေးငွေတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ အားလုံးအဖိုးအခဟာကှကျလက်ခံရရှိသူကပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်အပိုဆောင်းစွဲချက်ခြင်းမရှိဘဲ, မျိုးစုံ packages များရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
လိပ်စာသင် input ကိုမှန်ကန်စေသည်သေချာပါစေ။
သင်သည်သင်၏ဝယ်ယူနှင့်အတူလုံးဝကျေနပ်မှုမရပါက, သငျသညျအပြည့်အဝထုတ်ကုန်ပြန်အမ်းငွေအဘို့အ 30 ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
shipping ကုန်ကျစရိတ် Non-အမ်းဖြစ်ကြပြီးသင့်ကို item ပြန်လာဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးဆောင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးပြန်အမ်းငွေရလျှင်, ပြန်လာရေကြောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ပြန်အမ်းငွေထဲကနေနုတ်ယူလိမ့်မည်။
Adebayor - စည် - လိင်တူယောက်ျားရဲ့ရေကူးဝတ်စုံ € 34,99 € 24,99
Allen က - Boxer - လိင်တူယောက်ျားရဲ့ရေကူးဝတ်စုံ € 34,99 € 24,99
အမရေိ - အကျဉ်းချုပ် - လိင်တူယောက်ျားရဲ့ရေကူးဝတ်စုံ € 29,99 € 19,99
Amir - အကျဉ်းချုပ် - ဂေးအတွင်းခံ € 21,99 € 15,99
တပ်မတော် - Jockstrap - ဂေးအတွင်းခံ € 21,99 € 15,99
အာသာ - Jockstrap - ဂေးအတွင်းခံ € 22,99 € 16,99
ကျနော်တို့နှင့်အတူ Worldwide မှအခမဲ့ရေကြောင်းပူဇော် အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးဝယ်ယူ
ရိုးရှင်းစွာအအတွင်းကပြန်လာ 30 ရက်ပတ်လုံး တစ်ဦးလဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေအဘို့
ကျနော်တို့လုံခြုံငွေပေးချေမှုသေချာ SSL ကိုနှင့်အတူ by Credit Card ကို, ဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်
သင်္ဘော & Returns
* ယနေ့အချိန်တွင်တစ်ဦးက VIP ဖြစ်လာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှ Subscribe နှင့်သင်၏နောက်ဝယ်ယူချွတ် 10% ရ!
ငါ 16 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့် "Egay" မှစီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိရန်ကိုလက်မခံကြောင်းကြေညာ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏သတင်းလွှာတွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်မှာယူမှုဖျက် link ကိုမှတဆင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ငါတို့ကြည့်ရှု ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ။
© 2018 eGay ဆိုင်
All rights reserved ။
သမ္မာသတိသင်္ဘော & ငွေတောင်းခံလွှာ
si tu ce သတင်းစကား, c'est qu'il semble y က avoir un အသနားခံစာ soucis avec l'တပ်ဆင်ခက de တစ်တန် theme vois ။
Une လိုင်စင်အဖြစ် 1 / Tu?
အမြတ်အစွန်းက de Notre theme လောင်း il te faut installer ကို Notre လျှောက်လွှာ Shopify ။ Elle te permettra က de ce site ကို et d'enlever automatiquement ce သတင်းစကားàလိုင်စင် ta relier ။ C'est သြစတေး Grace elle Que tu à pourras အကျိုးရှိသောက de ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် Les mises à jour offertes avec les ပြင်ဆင်ချက်က de bug ကို et les အသနားခံစာaméliorations။
2 / Tu n'as pas က de လိုင်စင်?
utiliser Fastlane လောင်း comm indiqué dans nos စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, il te faut Une လိုင်စင်တန်းတူ site ကို။ tu peux t'en ဝယ်ယူရေး Une sur: https://by.ecomacademy.io/fastlane
fastlane@ecomacademy.io: nous အဆက်အသွယ်N'hésite pas ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလောင်း
သည် L'Equipment EcomAcademy